Laqanyo Casmara uma socdo Waxaan ahay Masuul kamida DFKMG
March 26, 2008: Waxaa somalitalk khadka telafoonka kula soo xariiray Safiirka Somaaliya u fadhiya Koofur Afrika Cabdikariim Faarax "Laqanyo" isagoo jooga maagalada London. Laqanyo wacidiisa ayaa ahayd ka jawaabid war shalay kusoo baxay somalitalk.
Somalitalk: Adoo mahadsan Safiir wicidaada maxaad uga gol leedahay?.
Laqanyo: Idinkaa mudan, waxaan beeninayaa war la'iga qoray oo ahaa inaan Casmara usocdo, dowlada FKMG ahna aan is khilaafnay, Waxaan ahay masuul kamida Dowlada FKMG ah, Casmarana uma socdo shaqana kuma lehi. Wixii ka khaldan anaga dhexdayada, waxaan ka xalinaynaa dhexdeena, anagoo dowlad ah ayaan isa saxaynaa.
Somalitalk: Safiir miyaan loo qaadan karin markii la is barbar dhigo hadaladaada hada iyo kuwii hore ee markaad Itoobiya Safiirka ka ahayd, inaad is badashay?. Taas oo loo aanaynayo markii lagaa badalay Safiirnimadii Itoobiya ee Koonfur Afrika lagu geeyey in siyaasadaadii isbadashay?.
Laqanyo: Maya taas sax ma'ahan dadkana waxay qorayaan iyagay jirtaa, Aniga waxaa la ii badalay markii hore New York oo ka fiican inaan Safiir ka noqdo, anaa diiday khalad Dowlada FKMG dhexdeeda ah dartiis, Koofur Afrikana anaa doortay. Waxaan kaloo kuu sheegayaa Safiir waa Safiir meeshii lageeyaba, waa isku mid, aniguna waan ku qanacsanahay Koonfur Afrika inaan fadhiyo.
Somalitalk: Waxaad ku celcelisay khalad Dowlada FKMG dhexdeeda ayaa jira, wax manooga sheegi kartaa?.
Laqanyo: Khaladaadka waxaa kamida in Dowlada FKMG iyo Dowlada Maraykanka ay dadka Soomaaliyeed argagixiso ku tilmaamayaan, Nuur Cade dibu heshiisiinta uu wado oo dowladu sidii ay ahayd ula wadin, Ciidamada AMISON in la soo dhamaystiro oo ay badalaan kuwa Itoobiyaank ah iyo khaladaad kaleba. Waxaanse aaminsanahay Dowlada FKMG inay dhexdeeda ka xalisato wixii khalad ah, ana waxaan saxayo anoo Dowlada FKMG kamida ayaan saxayaa.
Somalitalk: Safiir Cabdikariim aad baad umahahsantahay.
Laqanyo: Somalitalk aad baan idinkaga mahad celinayaa fursadaan aad isiiseen.
Faafin: SomaliTalk.com | Maarso 26, 2008
WIILKII MELEZ ZENAWI, LAQANYO, OO ISBAHAYSIGA DIB U XOREYNTA KA DALBADEY INUU KU SOO BIIRO
Dagaalo Lagu Baacsaday Qaar Ka Tirsan Ciidamada Dowlada FKMG Oo Dhac Gaystay Oo Ka Dhacay Muqdisho
Sideed qofood oo daacuun loosoo jiifiyey isbitaalka Degmada Dhahar, iyo wakaalada Wararka Dhahar Online oo ugu deeqday dawooyin...
March 25, 2008: Sida ay shegayaan ilo xog-ogool ah waxaa fashilmey oo is mari waa ku dhamaadey xiriirro iyo kulamo dhex marey safiirkii hore ee dawladda Imbaghatti u joogey Itooboya & Koonfur Afrika C/kariin Laqanyo oo mucaarad noqdey markii C/hi Yuusuf uu xilkii ka qaadey, waxaana xubno ka tirsan Isbahaysigu u sheegeen inuu marka hore Ummaddda Soomaaliyeed cafis weydiisto uuna garawsado khaladaadkii uu geystey, isna waxa uu ku adkaystey in marka hore la qaabilo.
C/kariin Laqanyo ayaa la sheegey inay dhowr jeer isku dhaceen C/hi Yuusuf kadib markii lagu eedeeyey inuu yahay nin si toos ah uga amar qaata Meleze Zenawi oo aan isu haysan inuu u shaqeeyo dawladda C/hi Yuusuf, waxaana uu ka mid ahaa shaqsiyaad siyaasadda ku soo galay xiriir fiican oo ay la lahaayeen saraakiil Itoobiyaan ah.
C/kariin Laqanyo oo ahaa ninkii xarunta Midowga Afrika Soomaaliya u joogey ee afhayeenka u ahaa difaacidda duullaankii Soomaaliya ay Itoobiya ku soo qaadey ayaa maanta markii uu xilkiisii waayey oo C/hi Yuusuf eryey wuxuu magaalada London dadka ku laxawsanayaa hadallo uu isugu ekeysiinayo nin ka soo horjeeda joogitaanka Itoobiya ee Soomaaliya waxaana uu wareysiyo uu bixiyey ku sheegey hadallo ay ka mid yihiin in Soomaaliya aysan argagixiso joogin iyo hadallo la mid ah, waase goorma? Waa markii uu waayey xilkii siyaasadeed ee uu ku doorsadey duullaankii lagu soo qaadey dalka.
Dagaalo ka dhashay dhac iyo boob ay qaar ka tirsan ciidamada dowlada KMG ah ka gaysteen isgoyska kaasa bobolaare ee degmada hodan ee caasimada muqdisho ayaa Isniin (24/3/2008) ka dhacay barxada tirabuunka kasoo u dhexeeyey ciidamada dowlada iyo xoogaga kasoo horjeeda .
Qaar ka tirsan ciidamada dowlada KMG ah ayaa Isniintii lagu soo waramay in ay dhac iyo boob ka gaystay dukaamo ku yaalay isgosyka kaasa bobolaare kaasoo aan dhowaanahanba la isticmaalin sababo amaan xumo awgeed inkastoo uu furmay maalmo kahor islamarkana ay yididiilo soo gashay ganacsatada dukaamada ku lahaa halkaasi .
Sidoo kale dhacan ay gaysteen qaar ka tirsan ciidamada dowlada KMG ah ayaa kusoo beegmay xili iyagoo ku guda jira dhaca iyo fadhataysiga dukaamo halkaai ku yaalay ay kasoo gaareen kooxo hubaysan oa dagaal ku qaaday ciidamadii ku Guda jiray boobka hantida shacabka taasoo ay ka baacsadeen hantidii ay doonayeen inay dhacaan askartaasi .
Maaha markii ugu Horaysay ee ay qaar ka tirsan ciidamada dowlada KMG ah ay ka gaystaan dhac iyo boob hantida shacabka ka ganacsada magaalada muqdisho taasoo ay qaylo dhaan kaso saareen saraakiil ka tirsan ciidamada milatariga iyo booliska dowlada KMG ah oo sheegay inay dadka shacabka ah ee ay dhacaan kuwa gashan dirayska ciidamada dowlada ay iska dhiciyaan islamrkaana ka hortagaan .
Waalaalka Muslinka Ahoow U Gargaara Gabdhan Yar Ee Ku Dhega Beeshay Daawo Qaldan Oo La Siiyey
Maymuun yuusuf c/raxmaan waa gabadh yar oo 11-jir ah oo la ildarn xanuun ka asiibay dhegaha islamarkaana u keenay dhego la,aan xanuunkaasoo ka dhashay 2-bishii 3-aad ee sanadkii 2002-da daawo lagu duray islamrkaana u keentay xanuunkan ka asiibay dhegaha .
Maymuun oo ah gabadha yar ee dhego la,aantu ku timid ayaa waxaa la geeyey dhaqaatiir badan oo jooga wadanka guduhiisa iyadoo xiligii ugu dambeeyeyna loo geeyey dhaqaatiirta kala ah Dr-maxamed jaamac oo ku sugan magaalada gaalkacayo islamrkaana ku takhasusay neerfaha iyo isla dhaqtar kale oo isna cilmi u leh neerfaha Dr-Cabdi jaamac maxamuud ayaa isku raacay in gadbahan aan waxba lagaga qaban Karin dalka soomaaliya gudhiisa iyadoo ay dhaqaatiirtu sheegeen in ugu sokeyn wax lagaga qaban karo dalka suuriya .
Hadaba walaalka muslinka ah ee doonaya inuu gar gaar ama meel daawo looga raadiyo gabadhaas yar u heli karoow taladaada ama deeq waxaad u awoodo ugu soo hagaaji telefoonadan kala ah ;
002521-5551992 ama 002521-600399 Muqdisho oo laga helo gabadha aabaheed oo lagu magacaabo yuusuf c/raxmaan sugule .
NB ;waxii faah faahin ah ka aqriso warqada athachka ee dhaqtarka ee kor saran wa billaahi towfiiq
Dhahar: Laba todobaad ka hor ayaa waxaa la keeney isbitaalka degmada Dhahar ugu yaraan 5 qofood oo ku dhacay daacuun waxaana nasiib daro ku nafwaayey gabar da'deedu yartahay. Markale ayaa hadana waxaa shalay isbitaalka kusoo xeroodey ugu yaraan 8 qofood oo kale oo iyagana qaba cudurka daacuunka ama loo yaqaan shuban biyoodka oo dhamaan dalka Soomaaliya haatan saameeyey.
Isbtitaalka degmada Dhahar ayaa wuxuu helaa dawooyin aad u yar, oo uu ka helo hay'ada UNICEF taasoo uu helo dhowrkii biloodba mar. Waxaa xusid mudan in isbitaalka dhaqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha ay ku shaqeeyaa tabaruc.
Wakaalada wararka ee Dhahar.com ayaa waxay maanta isbitaalka degmada Dhahar soo gaarsiisey dawooyin kala duwan ay ugu tala gashay dadka bukaanka ah oo ku xanuunsan isbitaalka Dhahar, kadib markii ay baahida jirta ay u muuqatey.
Dr. Maxamed Saalax Bardaan oo ah maamulaha isbitaalka degmada Dhahar ayaa wuxuu uga mahadceliyey maamulka wakaalada wararka ee Dhahar, Ditoorka ayaa sheegay in xag aduun iyo xag aaqiraba ay ka abaal helayaan cid alaale iyo cidii ka qeyb qaadata barnaamijyada noocaan ah, wuxuuna ugu baaqey in dadka kale ee deegaanka iney sidaasi uga qeyb qaataan, gaar ahaan dadka qurba jooga ah.
Faafin: SomaliTalk.com | Maarso 25, 2008
Dagaallo lagu jabiyay ciidamada cadowga Itoobiya
Dhibaatooyin cadowgu dadwaynaha u gaystay.
Ciidammo Itoobiya ka soo goostay oo tagay Eritereya
Congressman Donald Payne oo ka qayb galey kulan ay qabteen Golaha Jaaliyadaha Geeska Afrika.
Shir ka dhacey Nairobi oo tabarucaad loogu sameeyey dadka tabaalaysan ee Ogadeniya
Dagaallo lagu jabiyay ciidamada cadowga Itoobiya.
Dagaallo CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya dhexmaray labadii toddobaad ee u denbeeyay waxaa gumaysiga lagaga dilay ugu yaraan 44 askari, waxaa sidoo kale lagaga 59 askari, sidaas waxaa noo soo tabiyay wariyaha RX uga soo warrama dalka Ogaadeenya. Dagaalladaasi waxay u dhaceen sidatan;
19/03/08 cutub ka tirsan CWXO ayaa weerar mir ah ku qaaday ciidammada gumaysiga ee fadhiga magaalada Yoocaale, waxayna gaadhsiiyeen khasaare aan faahfaahintiisa la halin.
18/03/08 dagaal ka dhacay Dharyaha Cawl-ku-dhal, waxaa ciidammada gumaysiga loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa wali la halin.
Sidoo kale 18/03/08 dagaal adaga oo CWXO iyo kwa gumaysiga ku dhex maray Ceel-xaar, oo ka tirsan degmada Qabridaharre, waxaa ciidammada gumayisga lagaga dilay 9 askari, 13 kalan waa lagaga dhaawacay.
17/03/08 waxaa weerar mir ah lagu qaaday ciidammada gumaysiga eek u sugan Cawl-ku-dhal, waxaana laga dilay inta la ogyahay 2 askari, 4 kalana waa laga dhaawacay.
16/03/08 weerar gaadmo ah oo lagu qaaday ciidammo gumaysigu leeyahay oo ku sugnaa Gudhis, waxaa lagaga dilay 2 askari, 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 16/03/08 dagaal isaguna ka dhacay Goore-toorre, oo Fiq ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 2 askari, 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
Sidoo kale 16/03/08 dagaal adag oo laba mar oo kala duwan ka dhacay Bukudhabo iyo nawaaxigeeda, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 16 askari, 15 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/03/08 Jidhacle, oo Haarcad ka tirsan, waxaa lagu qaqabtay koox Dabaqoodhi ah, kuwaasoo la iska sii daayay, ka dib markii laga qaaday hubkii ay shacabka ku dhibayeen. Isla taariikhdan kor ku xusan waxaa weerar gaadmo Jidhacle loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay, kuwaasoo la gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Isla 15/03/08 cutub ka tirsan CWXO ayaa weerar mir ah ku qaaday ciidammada gumaysiga ee fadhigoodu yahay magaalada Iimey, waxayna ka dileen inta la ogyahay 7 askari, 9 kalana waa laga dhaawacay.
14/03/08 dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhex maray Lakuqotomaley, oo Dig u dhaw, waxaa gumaysiga lagaga dilay 2 askari, waxaa sidoo kale lagaga dhaawacay 3 askari.
Sidoo kale 14/03/08 Kurtun, oo Huuraale u dhaw, waxaa weerar mir ah loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay, kuwaasoo la gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahitiisa la haynin.
13/03/08 Laanqayrta, oo degmada Dhanaan ka tirsan, waxaa weerar gaadmo ah loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay oo halkaas hawlgal u tagay, waxaana la gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Sidoo kale 13/03/08 dagaal ka dhacay Jilayga, oo u dhaw Buurta Qarri-jiqood, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 3 askari, waxaa kaloo lagaga dhaawacay 4 askari.
06/03/08 Dhabab, oo Garasley u dhaw, waxaa weerar gaadmo ah loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay, kuwaasoo laga dilay 1 askari, 2 kalana laga dhaawacay.
29/02/08 cutub ka tirsan CWXO ayaa weerar mir ah ku qaaday ciidammada gumaysiga ee fadhigoodu yahay magaalada Sagag, waxayna weerarkaas kaga dileen inta la ogyahay 3 askari.
28/02/08 dagaal ka dhacay Garsley waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 2 askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
Ciidammada gumaysiga ayaa dhibaatooyin kala duwan ugu gaystay dadwayne rayad ah meelo kala duwan oo Ogaadeenya ka mid ah. Dhibaatooyinkani waxay isugu jiraan dil, xidhay iyo dhac, waxayna u dhaceen sidatan;
17/03/08 waxay ciidammada gumaysigu magaalada Jidhacle ku dileen seddex nin oo rayad ah, kuwaasoo aanaan magacyadooda halin, laakiin aan laba ka mid ah ina-ayahooda, kuwaasoo kala ah; Ina Maxamed Xuseen iyo Ina Gaaxuug.
16/03/08 Wayla-lagu-xidh waxay ciidammada gumaysigu dhulka ku harqiyeen biyaha Barkadii ugu denbaysay ee biyo ku sii jireen, iyagoo ciqaab uga dhigaya dadwaynihii intifaacsanayay iyadoo waliba lagu jiro xilli Jiilaal ah oo abaar adagi ay ka jirto guud ahaanba gobollada dalka Ogaadeenya. Ciidammada gumaysigu waxay biyihii Barkada qayb ka mid ah ku daadiyeen dhulka, qaybtii kalana waxay ku dhaansadeen Boyado waawayn, kuwaasoo ay ula kaceen dhinaca Nus-dariiqa. Barkadan waxaa iska leh muwaadinka lagu magacaabo Dayib Cabdi Cumar.
Isla 16/03/08 Galaalshe waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Cabdi Idiris Carte iyo
2- Fatxi Xasan Carte
14/03/08 magaalada Sagag waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Maxamed Cumar iyo
2- Dayib Shukri
13/03/08 waxay ciidammada gumaysigu magaalada Fiiq ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Khadar Camale
2- Cali Xasan Heebaan iyo
3- Maxamed Axmed Heebaan
11/03/08 Ceel-xaar, oo Qabridaharre ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu jidhdil ba�an ugu gaysteen dadka kala ah;
1- Nimco C/llaahi Dhiidhiile
2- Xasan-baarri Shaafici
3- Maxamed Xasan Baarid iyo
4- C/qaadir Maxamed
08/03/08 Kurtun waxay ciidammada gumaysiu ku xidhxidheen dad badan oo rayad ah, waxaanan magacyadooda halnay;
1- Khalweeye Cabdi Cumar
2- C/llaahi Alaaki Cumar
3- Layl Maxamed Xuseen
4- Maxamuud Waayeel C/llaahi
5- Shariif Cabdi Shariif C/llaahi
6- Axmed Aw Maxamed Cabdi
7- C/risaaq Aw Axmed Cabdi
8- Xasan Aw Axmed Cabdi
9- Maxamuud Axmed Biiriye
10- Farxaan Sulub Ibraahim
11- Xayi Aw Axmed Aw Isaaq
12- C/llaahi Maxamuud Oday
13- Yuusuf Cabdi Mataan
14- Maxamuud Cali Gaaciye iyo
15- Xasan Waayeel C/llaahi. Labadan nine e u denbeeya waxay hadda xidhan yihiin muddo afar bilood ah.
03/03/08 Abeesaale, oo Dhuxun ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku xidheen ninka lagu magacaabo Deeq Maxamed Diiriye
24/02/08 Laga-hidda, oo Fiiq ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadwayne rayad ah oo aad u badan, waxaanan magacyadooda halnay;
1- Nooc Cabdi Daahir
2- Mahado Cabdi Maxamed
3- Cosob Khaliif
4- Istaahil Ibraahim-dheere
5- Maxamuud Sulub Sahal iyo
6- Xuseen Sulub Sahal.
Ciidammada gumaysigu waxay dadkan ka dhaceen ugu yaraan 6 Qori.
Lix askari oo ciidammada Itoobiya ka goostay ayaa toddobaadkii hore gaadhay dalka Eritereya, waxayna si faahfaahsan uga xogwarrameen heerka ay gaadhay niyad jabka iyo mooraal xumada ciidammada Itoobiya.
Askartan goosadka ah ayaa sheegay in midab kala sooc iyo is-addoonsi aad u sarreeya uu ka jiro ciidammada dhexdooda, iyadoo saraakiisha u dhashay qowmiyada Tigreegu ay ku amar ku-taagleeyaan askarta ka soo jeeda qowmiyadaha kale, waxayna tilmaameen in xaaladda Itoobiya ay marba ka denbeeya ka sii xumaanayso.
Askartani waxay sheegeen in askarta aan loo oggolayna inay dhagaystaan raadyaha Eritereya iyo raadyayaasha kale ee caalamiga ah. Waxay sidoo kale sheegeen in askar aad u badan ay ku xidhxidhan yihiin meelaha kala ah Mekele, Shire-Endasilassie iyo Hurso Centers.
Waxay kaloo intaas ku dareen in kala shakiga iyo aamin darradu ay aad ugu badatay askarta dhexdeeda, iyadoo ay sabab u tahay siyaasada cunsurinimada ah ee xukuumadda Itoobiya ku dhaqanto
Golaha Jaaliyadaha Geeska Afrika (East African Community Forum) ayaa shir ku qabtey Jaamacada Magaalada Minneapolis ee Minnesota.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen Mudanayaasha kala ah Congressman Donald Payne iyo Keith Ellison, ayaa waxaa looga hadlayey xaalada murugsan ee Geeska Afrika.
Mudane Donald Payne oo shirkan uga soo socdaaley magaalada Washington ayaa halkaas ka soo jeediyey warbixin aad u dheer oo ka hadleysa xaalada Geeska Afrika iyo waxyaabihii uu kala soo kulmey safar uu dhawaan ku tagey halkaas.
Donald Payne oo ka warbixinaya safarkiisii waxa uu sheegay in uu kulamo la soo qaatey madaxda wadanka Eritrea iyo Itoobiya, isla markaana uu kala hadley arimaha xuquuqul Insaanka iyo Xadka labada wadan. Waxa uuna sheegay in ay lagama maar maan tahay in Itoobiya aqbasho go'aankii maxkamada ee Badame lagu siiyey Eritrea, maadaama Itoobiya saxiixdey in ay u hogaansami doonto go'aanka maxkamada.
Sidoo kale, waxa uu aad uga hadley xaalada Xuquuqul Insaanka iyo bani'aadamnimada ka baxsan ee Itoobiya ka wado Ogadeniya, isaga oo sheegay in booqdey xerada Qaxootiga ee Dhadhaab, Kenya, halkaas oo uu kula soo kulmey dad badan oo ka soo barakacay Ogadeniya. Dadkaas oo uga warbixiyey dhibaatooyinka ay Cidmada Itoobiya ku hayaan shacabka Ogadeniya.
Mudane Donald Payne waxa uu sheegay in waxyabaha uu soo maqley ay ka mid tahay "in askarta Itoobiya wataan Silig ay dadka ku ceejiyan". Sidoo kale, waxay dadka soo barakacay ii sheegeen ayuu yiri "in askartu dadka qasab ku dagaal geliso".
Mar uu ka hadlayey dhinaca Siyaasada, Mudane Donald Payne waxa uu tilmaamey in Ururuka ONLF mar uu kulan la qaatey dabayaaqada Sanadkii 2007 ay u sheegeen sida ay diyaarka ugu yihiin in xaalada Ogadeniya nabad lagu xaliyo. Waxa kale oo uu intaas ku darey in Xukumada Itoobiya aad isagu daydey in Ururka ONLF lagu dhufto shaabada Argagixisada. Isaga oo sheegay in aysan caqli gal ahayn in Ururada mucraadka ee xaq u dirirka ah lagu dhufto shaabada Argagixisada.
Intaas kadib, ayaa waxaa warbixinadoodii bilaabey Xubnihii ka soo jeeday Jaaliyadaha Geeska Afrika, waxaana halkaas warbixinta 1aad ka soo jeediyey xubin ku hadlayey Urur lagu magacaabo SOMALI COUSE, xubinkaas oo ka hadley xasuuqa ay ciidamada Itoobiya ka wadaan Soomaliya iyo sida bulshada caalamku uga indho qarsaneyso. Mas'uullka u hadlayey Somali Couse ayaa sheegay in ay lagama maar maantahay sidii loo ilaalin lahaa xuduuda iyo wada jirka Soomaliya, isla markaana ay ciidamada Itoobiya uga bixi lahaayeen Soomaliya.
Waxaa isna goobtaas ka hadley Xubin ka socdey Jaaliyda Eritrea, kaas oo si kooban u sharaxay tarrikhda kooban ee xukumadihii Itoobiya isaga dambeeyey, isaga oo sheegay "in jirintaanka Xukumadihii Itoobiya ku tiirsanaayeen dagaal joogta ah oo ay la galaan deriskooda", wuxuuna intaas raaciyey "in taliska hada higaanka u haya Addis Ababa uu la mid yahay talisyadii hore"
Waxaa iyaguna halkaas ka hadley laba nin oo ka kala socdey qoomiyadaha Gambela iyo Oromada, kuwaas oo sheegay sida bani'aadamnimada ka baxsan ee Xukumada Itoobiya ula dhaqanto qoomiyadahooda.
Sidoo kale, Jaaliyada Ogadeniya oo ugu badneyd ka soo qayb galayaashii Shirka fadhiyey ayaa waxaa halkaas warbixin kasoo jeediyey Maxamed Cabaas oo ku hadlayey Magaca Jaaliyada Ogadeniya ee Minnesota.
Mudane Maxamed Cabaas, waxa uu ka hadley muhiimada ay Xuquuqul Insaaku leedahay iyo sida ay muhiimka u tahay in la difaaco. Mudane Maxamed waxa uuu intaas raaciyey in ay lagama maarmaan tahay in la helo taageerada bulshada caalamka, gaar ahaan kuwa jecel nabadgelyada, xoriyada iyo madaxda la doortey ee u heelan wax ka qabadka Xuquuqul Insaanka, sida Donald Payne oo kale. Wuxuuna intaas ku darey "in aysan xoriyad jiri karin ilaa la helo nabadgelyo"
Mar uu ka hadlayey mas'uuliyada dawlada Maaykanka ka saaran xuquuqul insaanka, Muane Maxamed Cabaas waxa uu yiri "Waxaan wediisaneynaa dawlada Maraykanka in ay taageerto kuwa xaq darada loo geystay, inta ay taageerayso kaligiitaliyaasha Geeska Afrika ka geysanaya falgalada ka baxsan bani'aadamnimada , kuwaas oo ay ugu horeyso Xukumada TPLF".
Waxaa xusid mudan in dadweynihii ka soo qaybgalay kulankan ay ugu badneyd Jaaliyada Ogadeniya, iyada oo aad calanka Ogadeniya ka arkeyso isaga oo ka babanaya madasha shirka, isla markaana aad maqleyso sacab iyo sawaxan badan oo lagu taageerayo qadiyada Ogadeniya.
Gebogabadii, waxaa shirka hadalo dhiiri gelin leh ka soo jeediyey Keith Ellison oo ah Mudanihii ugu horeeyey ee Muslim ah ee loo doorto aqalka Mudanayaasha Maraykanka, isla markana ah ninkii ugu horeeyey ee madow ah ee laga doorto Gobolka Minnesota. Mudane Keith waxa uu aad ugu nuux-nuuxsadey sida ay muhiim u tahay dadweynuhu ka qayb galaan siyaasada si arimahooda loola socdo. Isaga oo sheegay in mida kaliya ee dhibaatooyinkooda loola socon karaa ay tahay iyaga oo si joogta ah ula socodsiiya mas'uuliyiinta ay quseyso.
Shir ka dhacey Nairobi oo tabarucaad loogu sameeyey dadka tabaalaysan ee Ogadeniya.
Xaflad ay si weyn u soo qaban qaabisay Xarunta Waxbarashada Qoxootiga Ogadeniya ayaa waxa lagu qabtay magalada Nairobi ee dalkaan Kenya, iyadoo ay kasoo qeyb galeeyn dad badan oo kasoo jeedo gobolka Ogadeniya. Iyadoo lagu sameynayay taburacaad dhaqaalo ayaa loogu aruurinayay dadka Qaxootiga ee ku jiro xeryaha wadankani Kenya iyo kuwa kale oo ku yaala wadamo ka tirsan Geeska Afrika.
Waxaana halkaasi ka hadlay Gudoomiyaha Ururka waxbarashada Qoxootiga reer Ogadeniya Maxamuud Maxamed xikam oo si weyn uga waramay dhibaatada haysata dadka ogadeniya ee ku jira xeryaha qoxootiga ee ku yaala wadanka Kenya gaar ahaan gobolka ay ka dagto somaalida kuwaas oo ay ka mid yihiin xeryaha IFO, Xagar dheer ,Dhabaab, iyo kuwo kale oo ku yaala halkaasi. Isaga oo ka hadlaayey mar uu ku tagay halkaasi safar ayuu waxaa ku soo bandhigay xafladaasi Flim ay ka muuqato dhibaatada haysta dadkaasi oo isla xafladaasi gudaheeda lagu daawaday.
Mar aan wax ka way diinay dhibaatooyinka sida gaarka oga jira halkaasi ee haysta dadkaasi ayuu ku jawaabay Mr xikam �� dadka dhibatooyinka haysta waxa ka mid ah iyagoo kasoo qaxay dhulkoodi isla markaane ku jira iminka xeryo aysan ku haysan nolol kaafi ah iyo sidoo kale wax barasho�� ayuu yiri xikam oo ku daray �� dadka waxa ay u baahan yihiin in wax la baro sidoo kalane noloshooda kor loo soo qaado��.
Waxaa kaloo Film documentary ah uu ka hadlayay xaaladaha qalafsan ee ku nool yihiin dadka reer Ogaden ee kasoo qaxay Ogadeniya, waxa dadkii daawanayay ka muuqatay Calool yaw iyo murugo weyn.
Waxa lagu soo bandhigay Filmkaa ciyaal yar yar oo gubtay, haweyn ay kufsadayn ciidamada itoobiya, dad kasoo qaxay dhibaatada ay ciidamada itoobiya ku hayaan shacabka daga gobolka Ogadeniya.
Ugu danbeyntii ayaa dadkii halkaasi iskugu yimid ayaa tabarucaad u sameyey walaalahooda uguna deeqay qof walba wixii uu awooday.
Waxaa ka mid ahaa shaqsiyaadkii halkaa ka hadalay dad ay dhibaato kaga timid dhicaya Ciidamada dowlada Ethiopia, kuwaa soo u badnaa Gabdho la kufsaday.
Xafladan oo ay sida wada jirka ah u soo qaban qaabiyeen Ururka waxbarashada Qoxootiga reer Ogaden iyo Ururka xuquuqul insaanka Ogaden ayaa waxay ku soo dhamaatay si heersare ah, iaydoo uu sheegay Mr. Xikam in ay sidoo kale qaban doonan shirar kale oo lagu sameynayo tabarucaadyo loo sameynayo dadkaasi u baahan in la gacan qabto.